नम्बर १ प्रदेशवाट एमालेको घोषणा ९० स्थानीय तहमा चुनाव जित्छौं
बिराटनगर । नेकपा एमालेले आसन्न स्थानीय चुनावमा प्रदेश नम्बर १ का ९० स्थानीय तहमा पार्टीले जित्ने दाबी गरेको छ ।
मंगलबार र बुधबार बिराटनगरमा बसेको प्रदेश नम्बर एकको वैठकले एमालेको प्रदेश कमिटीले चुनावको तयारी तीव्र बनाएको छ । उम्मेदवार छनोटका लागि मापदण्ड पनि बनाएको छ ।
एमालेको स्थायी समितिले स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गरी यसअघि नै मापदण्ड बनाइसकेको थियो । प्रदेश नम्बर एकको वैठकले मेयर र उपमेयरका लागि तल्लो तहबाट भएको सिफारिसमा उम्मेदवारहरुलाई थप व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकले प्रदेश नम्बर १ को समृद्धि र विकासका लागि गुरुयोजना बनाउन केन्द्रीय सचिव भीम आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । समितिमा पूर्व सञ्चारमन्त्री शेरधन राईसहित जगन्नाथ खतिवडा, हिक्मत कार्की, जीवन घिमिरे, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, मञ्जु चौधरी, रुपनारायण श्रेष्ठ, गुरु बराल, मोती दुगड, मणिराज उपाध्याय, हिराबहादुर थापा, खेम नेपाली र तेज ढकाल सदस्य रहेका छन् ।
शेरधन राईको नेतृत्वमा आर्थिक विभाग गठन गरेको छ । संगठन विभाग प्रमुखमा जगन्नाथ खतिवडा, प्रचार विभाग प्रमुखमा हिक्मत कार्की र स्कुल विभाग प्रमुखमा जीवन घिमिरे संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकमा एमाले नेताहरुले एक नम्बर प्रदेशका ९० स्थानीय तहमा पार्टीले चुनाव जित्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश सदस्य जीवन घिमिरेले तराईका केही क्षेत्रबाहेक एमाले अन्य सबै स्थानमा चुनाव जित्ने दावी गरे । एमालेले हार्ने ठाउँ नै नदेखिएको भन्दै नेता घिमिरले ९० स्थानीय तहमा एमालेले चुनाव जित्ने दाबी गरे ।
झापामा १२, मोरङमा ९ देखि १३ वटा र सुनसरीमा ६ देखि ८ वटा स्थानीय तहमा चुनाव जित्नेएमालेको दाबी छ । प्रदेश नम्बर एकमा तीन वटा उपमहानगरपालिका, ४६ वटा नगरपालिका र ८८ वटा गाँउपालिका छन् ।
१० दिनपछि आएको शालिकराम पुडासैनीको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा के छ ?
गृहमन्त्रीका भाइलाई थुन्‍न उच्च अदालतको आदेश
जापानी भाषा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको लागि १४ जना छनोट
चुनावकै मुखमा मधेशमा राजपा र नयाँ शक्तिलाई माओवादीको धक्का